Boqorka Sacuudiga Oo Farmaajo Ugu Hambalyeeyay Munaasabadda 21-ka October.
Saturday October 21, 2017 - 13:32:15 in Wararka by Super Admin
Madaxweynaha dowladda Federaalka ayaa dhambaal rasmi ah ka helay Boqorka Sacuudiga, waxaana dhambaalka lagu sheegay in ay tahay tahniyad ku aaddan munaasabada 21,October oo Sacuudigu aaminsanyihiin ay tahay maalinta xuriyadda Soomaaliya.
Dhaxal-sugaha Boqortooyada, ahna R/wasaare ku xigeenka iyo Wasiirka Difaaca ee Sacuudiga, Maxamed Bin Salmaan Bin C/casiis wuxuu isaguna Khadka Telefoonka kula soo xiriiray Madaxweyne Farmaajo oo uu ugu hambalyeeyey waxa uu ugu yeeray Munaasabadda Maalinta Qaranimadda Soomaaliya.
Wakaaladda wararka Sacuudiga ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaan WAS ayaa website-keeda ku faafisay dhambaalka halmbalyada ee ku socda Farmaajo.
"Waxaan urajeynaynaa Madaxweynaha Dowladda Federaaliga ah, Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo Shacabka Soomaaliyeed in ay ku waaraan horumar iyo Barwaaqo" ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Boqor Salmaanka Sacuudiga.
Dhambaalkaan ayaan lagusoo beegay Munaasbadda xilli maanta ay ku beegantahay 21 October oo aheyd markii Max'med Siyaad Barre uu xukunka Soomaaliya la wareegay sanaddii 1969, xilligaas oo uu dalka ka hirgeliyay nidaam shuuci ah oo ku xiran Midowgii Suufiyeeti.
Madaxtooyada Villa Somalia dib uma sixin in aysan Munaasabadda Maalinta Xornimadda Somalia ku beegnayn 21-ka Octobar, 48 sanadood ayaa laga joogaa markii uu curtay kacaankii shuuciga ahaa oo Farmaajo qudhiisa kamid ahaa saraakiishii nidaamkaas.
Baraha Bulshadu kuwada xiriirto ee (Social Media) ayaa saacadihii lasoo dhaafay si weyn layskula dhax marayay in Khudbadii Farmaajo ka jeedin lahaa labada aqal uu ugu dabaal degayo curashadii Kacaankii Siyaad Barre arrinkaas oo sababay in lataliyaasha madaxweynaha ay ku qasbaan in uu dib udhigo khudbadda si meesha looga saaro tuhunnada jira.